Orodyahan Mo Farah oo caawa ku fashilmay inuu ku guuleysto orodka 5000 ee Mitir+Sawirro | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Orodyahan Mo Farah oo caawa ku fashilmay inuu ku guuleysto orodka 5000 ee Mitir+Sawirro
Sir Mo Farah ayaa ku guuldareystay Tartanka Orodka 5,000m ee adduunka, kaddib markii uu kaalinta labaad uu caawa ka galay orodka 5,000m ee Tartanka ciyaaraha fudud Adduunka ee ka socda London.
Orodyahan u dhashay dalka Itoobiya oo lagu magacaabo Mukhtar Edris ayaa kaalinta koowaad ka galay, kaasoo si cajiib ah uga hor-maray Mo Farah oo 5-tii sano ee u dambeysay Heystay Orodka 5,000m iyo 10,ooom.
Todobaadkii hore ayay aheyd markii uu ku guuleystay orodka 10,ooom markii afaraad, balse markan waa uu ku guuldareystay inuu ku guuleysto Orodka 5,000m.
Mo Farah ayaa helay Bilada qalinka, halka Edris uu ku guuleystay bilada dahabka ee kaalinta koowaad Orodka 5,000m, halka Orodyahan u dhashay Mareykanka Paul Chelimo uu galay kaalinta saddexaad.
Orodyahanka Asalkiisa Soomaaliga yahay ayaa horay taariikh uga dhigay orodka 5,000m iyo 10,000m ee Tartankii Olimbikada Adduunka ee lagu qabtay magaalooyinka Rio De Janeiro iyo London sanadihii 2012 iyo 2016.
Farah ayaa marnaba ku guuldareysan ciyaar Final muddo 2,176 maalmood, isagoo horay ugu guuleystay orodka 10,000 iyo 5,000m ee sanadihii 2013 iyo 2015 ee Tartanka Ciyaaraha cudur adduunka, isagoo xariiqda ka gudbay daqiiqado gaaraya 13.33.22 sekan.
Mo Farah oo 34 ayaa la saadaalinayay in hadii uu ku guuleysto biladaha dahabka ee tartamada orodka 5,000m iyo 10,000m inuu soo gaba gabeyn doono waayihiisa ciyaareed, balse lama oga go’aanka uu qaadan doono, maadaama looga guuleysto tartankii caawa ee 5,000m